Ubuciko - I-unCommission
Iletha izindaba + nemininingwane ekuphileni
Ubuciko balethe injabulo, ugqozi, kanye nokuxhumana nenqubo yokungaKhomishani, okwenza izimo zokuqonda okwabelwana ngazo ngendlela ubuciko kuphela obungayenza.
Ubuciko obuvela kumculi wethu oyisakhamuzi, i-Play Steinberg, busiza ukwenza incazelo yakho konke ababalisi bethu ababelana ngakho. Ukwengeza, ubuciko obuvela ezinhlanganweni zobuciko ezisekelwe emphakathini ezweni lonke buhlola Ingqikithi yokuba ku-STEM, nabantu abasha babelana ngolwazi lwabo ngobuciko futhi banikeze okuyiqiniso kubo nasemiphakathini yabo.
Imifanekiso engenhla ye-Play Steinberg ifaka phakathi izingcaphuno ezivela kubaxoxi bezindaba abane: u-Kendra Hale, u-Kaitlyn Varela, u-Dorianis Perez, kanye nomxoxi wezindaba ongaziwa.
Ubuciko obungezansi bubonisa incazelo, izinkolelo, nemibono yalaba baculi nemiphakathi futhi akufanele kuthathwe njengokumelela imibono ye-UnCommission noma 100Kin10.
Umsebenzi ovela kuCiko Lesakhamuzi se-UnCommission
Umculi oyisakhamuzi u-Play Steinberg wenze amazwi abaxoxi bethu aphila, aphefumulela amatimu esiwazwile ngokuphindaphindiwe.
I-Illinois: Umsindo Wokuphila
E-Illinois, abafundi badale ubuciko bomsindo obuhlola umqondo wokuba ku-STEAM.
INorth Carolina: Izindaba Zethu ze-STEM
ENyakatho ne-Carolina, abafundi badale incwadi equkethe ukuveza kwabo ngobuciko bemibono yabo nge-STEM.
Ubuciko obuningi obudalwe abafundi buyeza maduze!
Unombuzo? Thumela i-imeyili ku-unCommission@100Kin10.org